Ngubani owafaka iisepha kunye neemeter?
Nangona eqeshwe yiProtter & Gamble, uDennis Weatherby wavelisa kwaye wamkela ilungelo lobunikazi be-dishwasher eyaziwa yi-tradename Cascade. Wamkela i-Masters degree kwi-yunivesithi yase-Dayton ngo-1984. I-cascade yirhwebo elibhalisiweyo le-Procter & Gamble Inkampani.
Umenzi wesepha kwi-Procter neGamble inkampani wayengazi ukuba entsha into entsha yayiza kufikelela xa ehamba isidlo sasemini.
Ngomnyaka we-1879, wayekhohliwe ukucima umxube we-sopu, kwaye ngaphezu kwexabiso eliqhelekileyo lomoya lithunyelwa kwisitya sococeko esimhlophe esithengiswa phantsi kwegama elithi "I-Soap White".
Ukwesaba wayeza kungena enkingeni, umenzi wesepha wagcina impazamo imfihlo kwaye ihlanganiswe kwaye yathumela isepha egcwele umoya kubathengi belizwe lonke. Kungekudala abathengi becela "ngaphezulu isepha ehamba." Emva kwamagosa eenkampani azifumanisa oko kwenzekayo, bawuguqulela waba yile micimbi ephumeleleyo yenkampani, i-Ivory Soap.
Inkampani yeNgesi Lever Brothers yathatha isonka sase-Lifebuoy ngowe-1895 waza wayithengisa njengesepha ye- antiseptic . Kamva bawutshintsha igama lomkhiqizo kwi-Lifebuoy Health Soap. I-Lever Abazalwana baqale baqulunqa igama elithi "BO," elimele iphunga elibi, njengenxalenye yenkampani yabo yokuthengisa yesepha.
UWilliam Shepphard isonka sokuqala samanzi eselungelo lobunikazi oluselungelo lobunikazi ngo-Agasti 22, 1865. Kwaye ngo-1980, i-Minnetonka Corporation yazisa isepha yokuqala yamanzi ekhoyo yabizwa nge-SOFT SOAP brand soap.
I-Minnetonka ikhuphe i-market seseparts ngokuthengwa konke ukunikezelwa kweepompo zeplastiki ezifunekayo kwiisepha ze-soap dispensers. Ngowe-1987, iNkampani yaseColgate yafumana ishishini lokusasa le-soap yaseMinnetonka.
Ngowe-1864, uCaleb Johnson wasungula inkampani yesepha ebizwa ngokuba yiBJ Johnson Soap Inkampani eMilwaukee.
Ngomnyaka we-1898, le nkampani yazisa isepha eyenziwe ngamasundu kunye namafutha omnquma okuthiwa iPalmolive. Kwakuphumelele kangangokuba iBJ Johnson Soap Co. yaguqula igama labo ePalmolive ngo-1917.
Ngowe-1972, enye inkunkuma eyenza inkampani ebizwa ngokuba yiPeet Brothers Company yasungulwa kwiSixeko saseKansas. Ngowe-1927, uPalmolive wadibana nabo ukuba abe yiPalmolive Peet. Ngowe-1928, iPalmolive Peet ihlanganiswe neColgate ukwenza iColgate-Palmolive-Peet. Ngomnyaka we-1953, igama lancinciwe kuphela kwiColgate-Palmolive. Ukuhlambulula i-Ajax kwakungenye yegama labo lokuqala lwegama lophawu olusungulwa ekuqaleni kwee-1940.
Umkhandi uHarry A. Cole waseJackson, uMississippi wasungula waza wathengisa umkhiqizo ococekileyo ococekileyo obizwa ngokuba yiPine-Sol ngo-1929. I-Pine-Sol yinto enkulu yokuhlambulula indlu ekhaya. Cole wathengisa i-Pine-Sol kungekudala emva kokuveliswa kwayo waza wadala amaninzi acoceli obizwa nge-FYNE PINE ne-PINE PLUS. Bonke kunye noonyana bakhe, uCole waqala i-HA Cole Products Co. ukuvelisa nokuthengisa iimveliso zakhe. Amahlathi e-Pine azungeze indawo apho amaKoles ahlala khona kwaye anikezela ngeoli ephayini.
Ngomnyaka we-1917, u-Ed Cox waseSan Francisco, umthengisi weebhasi yeluminiyamu, wasungula ipade ephambi kwe-soaped kunye nokucoceka izimbiza.
Njengendlela yokuzibandakanya kubathengi abatsha, uCox wenza i-sophi yanyanzele i-steel-wool ipads njengekhadi lokubiza. Umfazi ogama lakhe libizwa ngokuthi i-SAP okanye i-"Save Our Saucepans". Ngokukhawuleza kwafumanisa ukuba i-SOS ipads yayiyimveliso eshushu ngaphezu kweembiza kunye neepane.
Ngama-1920, abantu baseMerika basebenzisa isepha kwi-flakes ukuze bahlambulule iimpahla zabo zokuhlamba. Ingxaki kukuba ama-flakes ayenzi kakuhle kumanzi onzima. Bashiya ingcambu kumatshini wokuhlamba, imibala edibeneyo kwaye baphenduka abamhlophe abamhlophe. Ukujongana nale ngxaki, iPutter neGamble yaqalisa umsebenzi wokufuna ukuguqula indlela abantu baseMerika bahlamba ngayo iingubo zabo.
Oku kwakhokelela ekufunyenwe kwee-molecules ezinxenye ezazibiza ngokuba ngama-synthetic surfactants. Inxalenye nganye ye "molekyuli yamangalisa" yenze umsebenzi othile. Omnye wadonsa igrisi kunye nococa kwiingubo, ngelixa enye enye ingcwatshisiwe yocwecwe ize ihlanjwe.
Ngomnyaka we-1933, ukufumanisa oku kwafunyanwa kwi-detergent ebizwa ngokuba yi "Dreft," leyo ingayisingatha imisebenzi engcolileyo.
Injongo elandelayo yayikudala isitya esicocekileyo esinokuhlambulula iingubo ezingcolileyo. Lo mkhumbi wawuyiTide. Yadalwa ngowama-1943, i-Tide detergent yayidibeneyo kunye nabakhi "abakhi". Abakhi bancedisa abaqhagamshelana nabaqhagamshelwano abafake iimpahla ngokugqithiseleyo ukuze bahlasele amanqabileyo, amabala anzima. I-Tide yaqaliswa ukuvavanya iimarike ngo-Oktobha 1946 njengesiqhumiso sokuqala esisemthethweni.
I-tide detergent yaphuculwa ngamaxesha angama-22 kwiminyaka yokuqala engama-21 kwimarike kwaye iPutter & Gable isazama ukufezekiswa. Unyaka ngamnye, abaphandi baphinda amanqaku amaminerali amanzi ukusuka kuzo zonke iindawo zaseMerika kunye nokuhlamba iimpahla ezingama-50 000 zokuhlamba ukuvavanya nokusebenza kwe-Tide detergent.
Imbali yeMechanical Pendulum Clocks kunye nee-Quartz Clocks
Ngubani owasungula i-OLED Technology?
Imbali yeJet Engine
Ukufa, iMali, kunye neMbali yoMbane weSihlalo
Imbali yePilisi yePilisi
Imbali ye-Hoover Vacuum Cleaners
Imbali yee-911 zeefowuni eziphuthumayo
Ngubani ophuhlise isifo sofuba sePolio?
Ukuhamba EJasmine Garden
Iimpawu zeNqabana zeNqanda kunye namaphetheni
Indlela iNqulo YabaPilisi Ephefumulelwe Ngayo Imbulelo
I-Bellarmine University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
"O Patria Mia" Iingoma kunye nokuguqulelwa kwimixholo
Akal - Ukuchithwa
Umda ukususela ngo-1810 ukuya ku-1820
Ukusebenzisa Isihlahla SokuKhisimusi Esiphilayo kunye neNjongo yokuPhalalisa
Inkolelo: Kunzima ukuba ngumKristu kunokuba ukholelwa kuThixo
Ixabiso le-P - Inkcazelo yeDictionary yexabiso le-P
I-Novena ukuya kwi-Saint Expeditus (kwiimeko eziphuculweyo)
Ukuguqulela 'Fumana' kwiSpeyin
Kutheni Izibilini Zingenazizibophelelo Zabo?
SAT Ulwazi lweSifundo soLwazi lwesiLatini
Bret Hart Timeline
Dweba iRose ngePer Tip Tip
Imoto ayiyi kuCwenga - IQela lokuQala ukuTshintshela
Ukubaluleka kweziThintelo zokuKhutshwa kweziTshintsho zeeMpahla
Ukucaciswa kwangaphambili Inkcazo kunye nemizekelo
Imfazwe yeZiqithi zeFalkland - iMfazwe Yehlabathi I
Ukwakha ifomu elipheleleyo lokugcinwa kweSikolo
-E_ER - IiVebhu zokuTshintsha zesiFrentshi
Isingeniso kwiiNtengo zokuThengiswa kweeNtengo
Uluhlu lwezolimo uLuther Burbank